Real Madrid ayaa ku fashilantay in ay hogaanka Spain si ku meel gaar ah u qabato kadib… – Hagaag.com
Posted on 10 Janaayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Real Madrid ayaa ku fashilantay inay qabato hogaanka horyaalka Spain, inkasta oo ay si ku meel gaadh ah u qaban laheyd, ka dib markii ay ku dhacday afka kooxda Osasuna oo barbaro goolal la’aan ah ku kala baxay, kulan ka tirsanaa wareega 18-aad ee horyaalka, halka Barcelona ay ku garaacday Granada 4-0 iyo Seville oo 3-2 uga badisay Real Sociedad.
Garoonka ciyaarta ayaan wax saameyn ah ku yeelan waxqabadka ciyaartoyda Real Madrid iyo Osasuna, mana jirin fursado badan oo khatar ku ah labada gool, sababtoo aheyd cimilada oo aad u qaboobeed iyo baraf ku habsaday qeyb weyn oo garoonka ah.
Real ayaa dhibicdeeda ka dhigtay 37 dhibcood oo kaalinta 2-aad ku jirta iyada oo hal dhibic ka dambaysa kooxda Atletico Madrid halka Osasuna ay leedahay 15 dhibcood kuna jirta kaalinta 19-aad.
Dhinaca kale laacibka reer Argentina ee Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona ​​ku hogaamiyay guul 4-0 ah oo ay ka gaareen kooxda Granada. Barcelona ayaa ku hormartay gool uu u dhaliyay Antoine Griezmann daqiiqadii 12-aad, ka dibna Messi ayaa dhaliyay labo gool daqiiqadihii 35-aad iyo 42-aad, waxay kusoo idlaatay qeybtii hore ee ciyaarta iyadoo Barcelona ay 3-0 ku hogaamineyso.
Qeybtii labaad, Griezmann ayaa dhaliyay goolkiisii ​​labaad iyo kan afaraad ee Barcelona daqiiqadii 63aad, qeybtaan ayaa sidoo kale waxaa kaarka cas ka qaatay ciyaaryahanka Granada Jesus Vallejo daqiiqadii 78aad.
Labadii gool ee uu Messi dhaliyay ayaa waxay ku hogaamisay kala horeynta gooldhalinta La Liga isagoo leh 11 gool, wuxuu hal gool ka horeeyaa gool dhaliyaha Villarreal ee Gerard Moreno.
Barcelona ayaa dhibicdeeda ka dhigtay 34 dhibcood iyaga oo ku jira kaalinta 3-aad, Granada dhibicdeeduna waxay ku joogsadeen 24 dhibcood oo ku jirta kaalinta 7-aad.